On umbuzo yini ukuletha bevela eHungary, izivakashi eziningi ebona wathi: "Yiqiniso, manje Tokay!". Nakuba leli lizwe futhi ukhiqiza ezingaphezu kwenkulungwane izinhlobonhlobo utshwala ayebuthakathaka, kepha imivini usayizi elincane esigodini, esenyakatho-mpumalanga Hungary - esimweni ekhethekile. Yini le ebenza ethize ngakho? Isimo sezulu kanye "bola yizicukuthwane". Kodwa izinto zokuqala kuqala.
Kukholakala ukuthi imivini zokuqala esigodini Tokaj-Hedalya itshalwe lase libhujiswa ngemaRoma. Izivini zihlanganisa emithambekeni eningizimu sezintaba eziphakeme. Lapha ezingezwakali entwasahlobo zemvula, ehlobo kushisa futhi ekwindla afudumele, okuyinto ngoNovemba sithathelwe indawo inkungu nobusuku yesithwathwa. Lezi izimo ezikahle ngenxa yokuphila ukhunta botritis cinerea, bola yizicukuthwane ngisho ngelika ngekhono layo saxosha umswakama okweqile kusukela amajikijolo. Ngo-November sokuvuna amagilebhisi kubukeka esishwabene like omisiwe. Kodwa Tokaj iwayini ihlukile YaseCrimea (isibonelo, kusukela "Sun Valley" futhi "Black Doctor"), ukuthi amajikijolo akuzona nje vyalyatsya ngaphansi elangeni elishisa bhe emivinini, kodwa ngaphansi inqubo ekhethekile zokuwohloka ngenxa ukhunta.
By the way, uzama ahlale imivini ezidumile emhlabeni wonke baye bahluleka. Njengoba iwine enhlonhlweni yaseCrimea, izikhulu Russian ayalwa ukuba alethe lapha imivini ezinkulungwaneni ezimbalwa, ukukhiqizwa iwayini wabelwa abaqashile amathathu, weza ngubani kusukela Tokaj. Kodwa ukugujwa zonke imithetho ubuchwepheshe akazange ukukhiqiza umphumela omuhle - amajikijolo nje vyalilis futhi ancipha. By the way, eRussia okokuqala wazama Tokaj newayini eSikhumbuzweni Falsdmitry umshado Marina Mniszek. Ziyakwazi kangaka uyakuthanda lezikhulu zakhe, olwasungulwa umsebenzi okhethekile ozinakekelayo ezifeza izidingo ezihlukahlukene saba khona njalo futhi bavikelekile falsification. Barrel ephelezelwa nothile lapho bevakashela iziguli ka hussars Hungarian.
Okusuke yotshwalo abadumile lalikhiqize kangangokuthi ngisho Museum yabo ivulekile wamanje. Kusukela iqoqo ocebile avelele ibhodlela kwethebula obomvu Asu kusukela Saratov. Nakuba sonke siyazi ukuthi Tokaj iwayini - omhlophe kuphela. Futhi eziningi mbumbulu ogeleza usuka eMoldova nase-Ukraine. Kanjani ukuqonda kungase butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi yokuthela ezihlukahlukene iwayini kusuka Tokaj hhayi abanjwe?
isiphuzo izindleko kuncike hhayi kusukela ezihlukahlukene emvinini ubuchwepheshe. Kuhle Tokaj iwayini, intengo zazo iqala ngo 20 euro ibhodlela, kungcono ukushaywa 6 Puttonen. Kusho ukuthini? Ekuqaleni kuka-September, amagilebhisi ziqoqwa for database. Wort amuncekela, ukubeka emiphongolweni. Ngemva frost wokuqala ongahambanga kahle ngoNovemba, futhi iya ezivinini. Dry amajikijolo abolile ifakwa e amaqoma - Puttonen ibalwa per 25 kg komkhiqizo. Ngo-136 litre emgqonyeni nge base iwayini wathela kwemithathu kuya iziqukathi ezinjalo eziyisithupha sokuvuna Novemba. Igcinwe ekhethekile ezindlini, izindonga nophahla zazo futhi wangcwatshwa isikhunta ke sicindezelwe, futhi waphoqelela isineminyaka emithathu noma emine.
Ukunquma ukuthenga Tokay iwayini, sinake ilebula. ace, lwendabuko, empeleni Furmint, mushkotay, Harslevelu - Ngaphansi igama isifunda esikhulu «Tokaji» kumele uhlobo iwayini ecacisiwe. Ilebuli umpetha inombolo ngaphezu kwalokho ebhaliwe Puttonen (ezintathu kuya kweziyisithupha) - kulapho babo, imnandi iwayini. Essence - isiphuzo esenziwe kuphela kusukela sokuvuna Novemba. Njengoba amajikijolo ushukela ngokwanele, ukuvutshelwa senzeka kancane, eminyakeni edlule. Lokhu ugologo newayini.
Ngubani UStepan Demura? Futhi kungani izwe liwubiza guru zezimali?